SAWIRO+XOG: Shariif Sh Axmed & Ergayga Gaarka ah ee QM oo arrimo xasaasi ah dhexmareen Saaka.
MUQDISHO(P-TIMES) – Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed ayaa saaka kulan saacado qaatay la yeeshay Ergayga gaarka ah ee Qaramada Midowbay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya James Swan, kulankaas oo ka dhacay magaalada Muqdisho, ayaa looga wada hadlay arrimaha cakiran ee hadda taagan.
Shariif Sheekh Axmed ayaa ergayga uga waramay walaaca ay ka qabaan xisbiyada siyaasaddu hab dhaqanka siyaasadeed ee Xukuumadda Soomaaliya, wuxuuna sheegay in walaaca ka sokow ay abuurayso xiiso colaadeed.
Shariif ayaa sheegay in hab dhaqanka dawladdu u dib dalka ugu celinayo ficiladii dumiyey Qaranimada dalka, loogana baahan yahay Beesha Calaamka in ay doorkooda qaataan.
Mid kamid ah ka qeybgalayaashii kulankan ayaa u sheegay Puntlandtimes in qodobada laga wada hadlay ay ku jireen doorashooyinka soo socda oo ay Madasha Mucaaradku ka muujiyeen walaac xoog badan oo ah arrimaha waqtigan taagan.
Madaxtooyada Soomaaliya ayey sheegeen in aysan daacad ka aheyn arrimaha doorashooyinka, sidaas oo kalena ay u aragto mucaaradka in lala dagaalamo, iyadoo hantida dawladda loo adeegsanayo oo ay walaac ka qabaan.
Ergayga gaarka ah ayaa muujiyey sidda wararku sheegayaan dareenkiisa arrimahan ku wajahan, wuxuuna sheegay in looga baahan yahay dawladdu in ay la timaado qorshe cad oo lagu taageero ka hor bisha November ee nagu soo beegan.
Kulamka oo ka dhacay gudaha Xaafiiska Qaramada Midowbay, intii uu socday waxaa lagu soo qaaday amaradii ay dawladda Soomaaliya xayiraada kusaartay Kismaayo, isla markaasna Shariif Sheekh Axmed laga hor istaagay, sidaas oo ay tahayna ay duulimaadyo ka dagayaan.